Shiinaha PET Dhalada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | FAYGO
FG taxanaha mashiinada dhalada afuufa ee 'PET' ayaa buuxiya meelaha banaan ee ka jira mashiinka afuufa toosan ee xawaaraha sare ee gudaha. Xilligan, xawaaraha toosan ee hal caaryada ah ee Shiinaha ayaa wali sii jiraya illaa 1200BPH, halka xawaaraha caalamiga ah ee hal-caaryada ah uu gaaray 1800BPH. Mashiinnada xawaaraha tooska ku afuufa waxay ku tiirsan yihiin soo dejinta. Marka la eego xaaladan, Faygo Union Makiinado waxay soo saartay mashiinka xawaaraha sare ee tooska ah ee xawaaraha sare ee Shiinaha: Mashiinka mashiinka dhalada ee FG, oo xawaaraha hal-caaryadiisu gaari karaan 1800 ~ 2000BPH. Mashiinka taxanaha dhalada ah ee FG-ga waxaa ka mid ah seddex nooc oo hadda ah: FG4 (4-god), FG6 (6-dalool), FG8 (8-god), iyo xawaaraha ugu badan wuxuu noqon karaa 13000BPH. Waxaa loo horumariyey gebi ahaanba madax-bannaan, waxay leedahay xuquuq aqooneed u gaar ah, waxayna heshay in ka badan 8 shatiyadaha qaranka.
Taxanaha FG Mashiinka Afuufa Dhalada PET
Mashiinkaani wuxuu ku qalabeysan yahay nidaam otomaatig ah oo wax lagu rakibo iyo dhalada. Waxay ku habboon tahay dhammaan qaababka dhalooyinka biyaha la cabbo, dhalooyinka kaarboonka leh iyo dhalooyinka wax lagu buuxiyo ee kulul. FG4 wuxuu ka kooban yahay sedex qaybood: wiishka prefrom, samee mashiinka mashiinka xaragoonaya iyo kan martida loo yahay.
Mashiinka tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah cabbirka heerarka nadaafadda. Mashiinkani wuxuu astaan ​​u yahay heerka ugu sarreeya mashiinnada afuufa toosan ee qaran. Waa qalabka ku habboon samaynta dhalada ee shirkadaha dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn.
FG Faa'iidooyinka Wax soo saarka FG
1. Gawaarida adeegga iyo kambuyuutarka isku xirka qaybta:
Nidaamka isku xirka kamarada gaarka ah wuxuu isku xiraa dhaqdhaqaaqa caaryada-furitaanka, quful-ka-xiridda iyo hoos-u-qaadista hal dhaqdhaqaaq, oo lagu qalabeeyo nidaamka wadista gawaarida xawaaraha sare leh oo si weyn u soo gaabinaysa wareegga afuufidda iyo kordhinta awoodda.
2. Yar wuxuu sameeyaa nidaamka kululaynta masaafada
Fogaanta kululeeyaha ee foornada kululaynta waxaa loo dhimay 38mm, marka la barbar dhigo foornada kululaynta caadiga waxay badbaadinaysaa in ka badan 30% isticmaalka korontada.
Ku qalabaysan nidaamka baaskiil wadista iyo nidaamka dheecaanka kuleylka ee xad-dhaafka ah, waxay hubisaa heerkulka joogtada ah ee aagga kululaynta.
3. Nidaamka soo gelida waxtarka iyo jilicsanaanta
Nidaamka gelitaanka wareega ee jilicsan iyo jilicsanaanta, xawaaraha quudinta prefom waa la hubiyaa isla markaa, qoorta preform si fiican ayaa loo ilaaliyaa.
4. Uureysiga naqshadeynta qaabaysan
Ansixinta fikradda naqshadeynta qaabaysan, si looga dhigo mid ku habboon oo kharash-badbaadin ah u leh dayactirka iyo beddelka qalabka dayactirka.
Lambarka caaryada (gabal)
Mugga ugu badan (mL)
Dhererka ugu badan (mm)
Dhalada wareega wareega ugu weyn (mm)
Dhalo laba jibbaaran (mm)
Qoorta dhalada gudaha ku habboon (mm)
Max dhererka preform (mm)
Wadarta awoodda rakibida (kW)
Foornada kululaynta awoodda dhabta ah (kW)
Danab / inta jeer (V / Hz)
Biyaha caaryada Cadaadis (bar)
Heerkulka heerkulka heerkulka (° C)
Biyaha foornada Cadaadis (bar)
Qiyaasta mashiinka (m) (L * W * H)
Miisaanka mashiinka (Kg)
Hore: Mashiinka Xashiishadda
Xiga: Mashiinka biibiile PPR
Khadkan waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu sameeyo granules ka sameysan walxaha caaga ah ee qashinka ah, sida PP, PE, PS, ABS, PA flakes, PP / PE films xoq. Waxyaabo kala duwan, xariiqan pelletizing waxaa loo qaabeyn karaa sidii marxalad hal marxalad ah iyo soo saarid labalaab marxalad ah Nidaamka pelletizing wuxuu noqon karaa mid waji u dhinta oo pelletizing ah.
Khadkan granulating caaggu wuxuu koontaroolaa xakamaynta heerkulka otomaatiga ah iyo waxqabadka xasiloon. Mashiinka biraha iyo foostada ayaa la heli karaa iyo isku-darka gaarka ah ee siinaya xoog iyo nolol dheer. Waxay ka dhaqaale badan tahay isha korantada iyo waliba biyaha. Soo saar ballaaran, nolol adeeg dheer iyo buuq yar
3 lakabka PERT (xabagta, UVH) khadka wax soo saarka tuubada
Waxaa ugu weyn loo isticmaalaa soo saarista PP-R, Tuubooyinka PE ee dhexroorkoodu yahay 16mm ~ 160mm, Tuubooyinka PE-RT oo leh dhexroor 16 ~ 32mm. Ku qalabaysan qalab saxan hoose, waxay sidoo kale soo saari kartaa tuubooyin muufti lakab ah PP-R, dhuumaha fiber galaaska PP-R, PE-RT iyo EVOH tuubooyinka. Sanado badan oo waayo-aragnimo ah oo loogu talagalay extrusion biibiile caag ah, waxaan sidoo kale soo saarnay khadka xawaaraha sare ee PP-R / PE, iyo xawaaraha waxsoosaarka ugu badan wuxuu noqon karaa 35m / min (saldhig ku yaal tuubooyinka 20mm).
Waxaa si weyn loogu isticmaalaa soo saarida tuubooyinka biyaha ee HDPE, dhuumaha keena gaaska. Waxay samayn kartaa dhuumaha HDPE ee dhexroorkoodu yahay 16mm ilaa 800mm. Iyadoo sanado badan oo horumarinta mashiinada balaastigga ah iyo qibradeynta naqshadeynta, xariiqan extrusion tuubooyin HDPE uu leeyahay qaabdhismeed gaar ah, naqshadeynta waa sheeko, qalabka qaabeynta qadka oo dhan waa macquul, waxqabadka xakamaynta waa mid lagu kalsoonaan karo. Shuruudo kala duwan awgood, xariiqan biibiile HDPE-ka ah waxaa loo qaabeyn karaa sida lakabka isku-xoqidda lakabka lakabka.
5L / 10L Mashiinka Buuxinta Dhalada otomaatiga ah
1. Dhalo otomaatik ah 3 oo ah 1 macdane / Mashiinka Biyaha Buuxinaya oo biyo ah waxay qaataan teknolojiyada Rinsing / Filling / Capping 3-in-1, PLC control, Touch Screen, inta badan waxaa laga sameeyaa heerka fasalka cuntada SUS304.
2. Waxaa loo isticmaalaa buuxinta noocyada biyaha aan kaarboon lahayn, sida biyaha wali jira, biyaha la cabbo. biyaha macdanta, biyaha guga, biyaha dhadhanka leh.
3. Awooddeeda wax soo saar ee caadiga ah waxay ku jirtaa 1,000-3,000bph, dhalada 5L-10L PET ayaa la heli karaa.
Mashiinka Buuxinta Saliida Cunitaanka
Mashiinkaani waa mashiinka wax lagu buuxiyo ee saliida monobloc si otomaatig ah 2-in-1 ah. waxay qaadataa nooca buuxinta bistoolada, waxay noqon kartaa mid lagu dabaqi karo dhammaan noocyada saliidda la cuni karo, saliidda saytuunka, saliidda gabbaldayaha, saliidda qumbaha, ketchup, khudradda miraha & khudradda (oo leh gabal adag ama aan lahayn), cabbitaanka granule cabbirka cabbirka iyo duubista. ma jiraan dhalooyin aan buuxin iyo goynin, nidaamka xakamaynta PLC, hawlgal fudud.
SJSZ taxanaha mataanaha ah ee isku dhejiska mataanaha ayaa inta badan ka kooban fur foosto, nidaamka gudbinta qalabka, quudinta tirada, qiiqa faakuumka, kululaynta, qaboojinta iyo koontaroolka korantada IWM.
Waa qalab gaar ah oo loogu talagalay budada PVC ama budada WPC. Waxay leedahay faa'iidooyin isku darka wanaagsan, wax soo saar ballaaran, socodsiin deggan, nolol adeeg dheer. Iyada oo leh caaryado kala duwan iyo qalab hoose, waxay soo saari kartaa dhuumaha PVC, saqafka PVC, astaamaha daaqada PVC, xaashida PVC, WPC decking, granules PVC iyo wixii la mid ah.
Tiro kala duwan oo boolal ah, labalaab isku dhejiye oo laba farood leh, sigle fur extruder kaliya waxay leeyihiin hal fur, Waxaa loo isticmaalaa waxyaabo kala duwan, labalaab isku dhejiye oo badanaa loo isticmaalo PVC adag, hal fur oo loo isticmaalo PP / PE. Double extruder extruder soo saari karaa tuubooyinka PVC, profiles iyo granules PVC. Hal soo-saaraha kaliya ayaa soo saari kara tuubooyin PP / PE iyo granules.